Ukongezwa kokufikelela kwidijithali kwiFowuni yokuqala, kwiPosi ye-Cookie yeHlabathi | Martech Zone
Ukongezwa kokufikelela kwidijithali kwiFowuni-yokuqala, kwiHlabathi yePookie
NgoLwesine, uJuni 25, 2020 NgoLwesine, uJuni 25, 2020 Douglas Karr
Njengoko indlela yokuziphatha yabathengi iqhubeka ishukuma ngokuphawulekayo kwizixhobo eziphathwayo, abathengisi bohlobo lwentengiso ngokuguqukileyo bajolise kugqaliso lwabo kwizicwangciso zokuthengisa eziziimobhayili. Kwaye, kuba abathengi besebenzisa ii -apps zabo kwiifowuni ezikrelekrele, ayothusi into yokuba intengiso yangaphakathi nohlelo iyalela isabelo sengonyama kwintengiso yeselfowuni. Ngaphambi kobhubhane, inkcitho yentengiso yeselfowuni yayikwindlela yokubona ukonyuka kweepesenti ze-20 kwi-2020, ngokwe-eMarketer.
Kodwa abantu abaninzi besebenzisa izixhobo ezininzi kunye nokusebenzisa imithombo yeendaba ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, ubungqina bokuba yingxaki kubathengisi ukuze baqonde isazisi somthengi kwilizwe lonke ledijithali. Iicookies zomntu wesithathu ezisetyenziselwa ukuba zibe yeyona ndlela iphambili yokuzibandakanya nabathengi ngeendlela zentlalo nezidijithali; Nangona kunjalo, ii-cookies ziye zanda phantsi kwezithintelo ezivela kubanikezeli abakhulu be-browser njengeGoogle, Apple kunye neMozilla Kwaye uGoogle ubhengeze ukuba uyakukhupha ikuki yomntu wesithathu kwi-Chrome ngo-2022.
Njengoko abathengisi bophawu bafuna ezinye iindlela zokuchonga abathengi kwimeko yasemva kwecookie, abathengisi ngoku batshintshela kwizicwangciso zabo zedijithali ii-ID zentengiso eshukumayo (ii-MAID) Ukuqhagamshela isimilo sabathengi kwizixhobo zonke. Ii-MAID zizazisi ezizodwa ezinikezelwe kwizixhobo zonke eziphathwayo kunye nokudibanisa i-MAIDs neempawu eziphambili ezinje ngobudala, isini, icandelo lemali engenayo, njl.njl.
Idatha yabathengi ngaphandle kweintanethi abathengisi abathembele kuyo njengeenombolo zefowuni, iidilesi, njl. Njl. Isisombululo sesazisi sinceda ukugcwalisa lo msantsa kwaye sisebenzise ii-algorithms ezintsonkothileyo ukumisela ukuba ngaba abamakishi abaphambili bezazisi bonke ngabomntu omnye. Iinkampani ezinje ngobuchwephesha bolawulo lwesazisi se-Infutor zakha ezi ntlobo zezazisi ezikwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi. I-infutor idibanisa idatha yabathengi ehambelana nemfihlo, kunye nedatha evela kweminye imithombo eyahlukileyo enje ngedatha yeqela lesithathu lobomi beedatha kunye nedatha yeqela leCRM, kwaye uyiqokelele kwiprofayili eguqukayo yomthengi.
Ukuzisa ii-ID zeeNtengiso zeSelfowni ezivela kwi-Infutor
Isisombululo se-ID esipheleleyo se-Infutor yindlela ebalulekileyo yokunceda abathengisi bagcwalise isithuba sesazisi emva kokukhukisha ngokuthelekisa ii-ID ezingaziwayo, ezingezizo ezeselfowuni zentengiso ezineedilesi ze-imeyile ezingxamisekileyo. Oku kwenza ukuba abathengisi bakhe iiprofayili zesazisi ezihambelana nobumfihlo kwaye baqinisekise ukuba bafikelela kubanini bezixhobo abafuna ukufikelela kuzo.
Ixhaswe yi-TrueSource yayoTM Igrafu yesiXhobo seDijithali, ii-ID zeAtutor zeAtutor ezipheleleyo zibandakanya ukufikelela kwizigidi ezingama-350 zezixhobo zedijithali kunye nezigidi ezi-2 ze-MAID / ii-imeyile ezikhawulezileyo Esi Sazisi seNtengiso yeFowuni kunye ne-imeyile ekhawulezileyo (MD5, SHA1, kunye ne-SHA256) isiseko sedatha siyimfihlo-kwaye siyafumaneka. Ezi zichongi zingaziwa zikhusela ulwazi oluchongiweyo lomntu (PII) ngelixa benceda abathengisi ukusombulula kunye nokunxibelelana nokuchongwa kwabasebenzisi bedijithali kuwo onke amaqonga nakwigrafu yabo yesazisi.
Ii-ID zeeNtengiso zeSelfowuni Isisombululo sinika abathengisi isongezo sokhuselo kunye nokufikelela kwangoko kwisisombululo sesazisi ngokukhawuleza. Isisombululo sinika enye inkalo yedatha eyandisa ukufikelela kwabathengisi ngobunikazi bedijithali kunye nokusonjululwa kwesixhobo esinqamlezileyo ngelixa kugcinwa ulawulo kwiqela lokuqala le-PII. Oku kwenza ukuba umyalezo omnichannel ohambelanayo uphucule ukwahlulwa kwabaphulaphuli kunye nokwenza ubuqu kumava abathengi anentsingiselo.
Idatha yesazisi seNtengiso yeeSelfowuni icocwe ngokuchanekileyo kwaye ifunyenwe kwizicelo ezisekwe kwimvume ngokusebenzisa imithombo emininzi ethembekileyo, eqinisekisa olona mgangatho uphezulu wedatha yedijithali. Inqaku lokuzithemba (1-5) lisebenzisa i-algorithm ephetheyo kusetyenziswa izinto ezinje ngokuhamba rhoqo kunye nokuhamba kwakhona kwezibini ze-MAID / hash eziqwalaselweyo kunye, ukongeza kwis syntax kunye nokunye ukuqinisekiswa ukuze abathengisi babenokwazi ukuba isibini siyasebenza.
Ukubeka idatha ye-MAID ukuba isebenze
Iqonga lokutshintshiselana ngedatha iBDEX idibanisa idatha evela kwimithombo emininzi kwaye iyicoce kabukhali ukuqinisekisa ukuchaneka kunye nemali yegrafu yesazisi. Igrafu yesazisi ye-BDEX inempawu ezingaphezu kweetriliyoni zedatha kwaye ixhobisa abathengisi ukuba babone umthengi emva kwesiginali yedatha nganye.
Ngokubambisana noMphathi, I-BDEX ifake idatha yesisombululo se-MAID iyonke kutshintshiselwano lwedatha. Oku kunyuse umthamo weenkcukacha zesazisi se-BDEX ukubonelela ngeemveliso kunye nabathengisi ngokufikelela kwingqokelela ebanzi ye I-MAID / ikhawuleze ngezibini ze-imeyile. Ngenxa yoko, i-BDEX iqinise idathasethi yedijithali enokuthi ibonelele abathengi ngokwandisa kakhulu inani lee-ID zentengiso yeselfowuni kunye needilesi ze-imeyile ezikhawulezileyo kwindalo iphela.
Kwilizwe ledatha elikhangela ezinye iindlela ekujoliseni ngokusisiseko kwidijithali, intsebenziswano ye-BDEX-Infutor ifike ngexesha elifanelekileyo. Utshintshiselwano ngedatha lwethu lwakhiwe ukuxhobisa ukunxibelelana kwabantu kunye ne-Infutor's Total Mobile Ad Solution sisongezo esomeleleyo ukusinceda sisebenze kule mfuno ikhula ngokukhawuleza.
UDavid Finkelstein, u-CEO we-BDEX
Ukufikelela Ii-ID zeeNtengiso zeSelfowuni Isisombululo, sabanjelwa kwindawo kunye nokufumaneka kwiindawo ezininzi zokuhambisa, kukuphumelela kubathengisi abafuna eyona datha isisombululo sesazisi igcweleyo ngoku. Abathengisi basebenzisa le datha ityebileyo yokwandisa ukufikelela kwabo ngokusebenzisa izazisi zedijithali ukujolisa abathengi kwizixhobo eziphathwayo, ukwenza imiyalezo engagungqiyo ye-omnichannel, ukuphucula amaxabiso okukhwela kwidijithali kunye nenkqubo yokujolisa kunye nokuxhobisa isixhobo sokudibanisa kunye nokusonjululwa kwesazisi.
Kwi iselfowuni-kuqala, Ipheke-cookie kwihlabathi, abathengisi bedijithali abaphumeleleyo basebenzisa idatha yegrafu yesazisi kunye nokusonjululwa kwesazisi ukubonelela ngokuqhubekeka kwizixhobo zonke kunye namava enziwe ngabantu afunwa ngabathengi. Idatha ye-Robust MAIDs ibalulekile ekuphuculeni isisombululo sesazisi kunye nokwakha iprofayili engaxhunyiwe kwi-intanethi kwimeko ye-cookie kunye nokubonelela ngokuhambelana okuyimfuneko okuphucula ukuguqula kunye nokwandisa i-ROI yenkcitho yentengiso yedijithali.
Funda ngakumbi malunga nesisombululo se-ID esipheleleyo seAututor
tags: iid adI-BDEXNgaphantsi kwecookieI-infutor iyonke ii-ID zentengiso eziSelfowuniumkhonzazanaziintombiUkuchongwa kweentengiso eziphathwayoIi-id zentengiso eziphathwayoiselfowuni-kuqalangokusemgangathweniZizonke ii-ID zentengiso eziSelfowni
Uyicwangcisa njani i-Function ye-Intanethi elula yokuThengisa kwi-Intanethi